स्वास्थ्यमा खेलवाड, औषधि विनाको अस्पताल « Light Nepal
स्वास्थ्यमा खेलवाड, औषधि विनाको अस्पताल
बुटवल, ४ बैशाख । यस क्षेत्रको सवैभन्दा पुरानो लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा रहेको अस्पतालको फार्मेसी नाम मात्रको रहेको छ । अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरेपनि अस्पतालमा प्रयाप्त औषधि छैन । निजामती कर्मचारीको दैनिकी जस्तै १० बजे देखि ५ बजे सम्म मात्र फार्मेसी सञ्चालन हुँदै आएको छ । लुम्बिनी अंचल अस्पतालको पूर्व पट्टीकोे यो निजि औषधी फार्मेसीमा औषधि किन्नेको लामो ताति छ ।
डाक्टरले लेखेको औषधीको प्रेस्किप्सन लिएर बिरामीका आफन्त औषधि किन्न हतारहतार गरिरहेका छन । तर त्यहि अस्पतालको उत्तरमा रहेको अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी भने सुनसान छ । ग्राहक फार्मेसीमा पुग्दा डाक्टरले प्रेसकिप्सनमा लेखे अनुसारको औषधी नपाए पछि फेरी निजि फार्मेसीमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।
“औषधि किन्न फार्मेसीमा गयो भने एउटा, दुई वटा मात्र औषधि दिन्छ, नभए औषधि छैन भन्छ” तामनगरबाट उपचारका लागि आएका गंगा बहादुर बुढाले भने । सानो र विरामीका आफन्तको आँखा नै नजाने स्थानमा रहेको फार्मेसी कतिपयलाई त अस्पतालको फार्मेसी भन्ने नै थाहा छैन ।
फार्मेसीलाई संचालन गर्न सरकारले फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२’ पनि ल्याएको छ तर प्रभावकारी संचालन नहुदा अस्पताल प्रशासन प्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । अस्पतालले व्यवस्थापनमा ध्यान नदिदा फार्मेसीमा प्रयाप्त औषधि पनि छैन । “हामीले पनि फार्मेसी राम्रो संग चलाउनुपर्छ भन्नेमा छौ” लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका सहयाक फार्मेसी अधिकृत दिनेश नेपालीले भने–“भर्खर हामी यहाँ आएकाले औषधिको प्रयाप्तताका बारेमा हामीलाई पनि थाहा छैन ।”
उनले औषधि प्रयाप्त नभएकाले विरामीहरुलाई फर्काउनु परेको बताए । “डाक्टरले लेखेको औषधि मध्ये एक, दुई वटा मात्र हामी संग हुन्छ, त्यहि औषधि लैजान विरामीहरु मान्दैन” उनले भने–“दुई तीन वटा औषधि दुई ठाउमा लिन चहार्दा उहाँहरुलाई पनि ग्राहो हुन्छ ।”
अस्पताल संग रहेको जनप्रिय फार्मेसीमा औषधी किन्नेको भिड भएपनि अस्पतालको फार्मेसी नजिक भने पार्किङ स्थल बनाइएको छ । अस्पतालले पनि जनप्रिय फार्मेसी त्यहाँ भएकाले आफ्नै फार्मेसीलाई व्यवस्थापन गर्न ग्राहो भएको बताएको छ ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. कृष्ण खनालले अस्पताल विकास समिति यस अघि नै जनप्रिय फार्मेसीलाई टेण्डर मार्फत भाडामा दिएकाले आफ्नै फार्मेसी व्यवस्थापनमा ग्राहो भएको बताए । “टेण्डर गएपछि मात्र सरकारले आफ्नै फार्मेसीको अवधारणा ल्यायो अहिले त्यो हटाउ भन्न पनि सकिदैन” उनले भने । उनले अब जनप्रिय फार्मेसी रहेको स्थानमा टेण्डर लगाउने र विस्तारै भवन बनेपछि पनि आपm्निै फार्मेसीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । “ठाउ नभएकै कारण साघुरो कोठामा हामीले फार्मेसी राखेका छौ, अस्पतालको भवन बनेपनि केही सहज भने हुनेछ” उनले भने ।
औषधी नहुदाँ दैनिक १२ घण्टा खुल्ने गरेको फार्मेसी अहीले दैनिक ६ घण्टा मात्र खुल्दै आएको छ । यता प्रदेश सरकारले पनि यस अस्पतालको स्तर बृद्धि संगै सेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्ने योजना बनाएको बताएको छ । प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बरालले अस्पतालको बृद्धि विकास संगै अस्पतालको सेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्नमा सरकार तयार रहेको बताए । “हामीले अस्पतालको सेवालाई कसरी जनमैत्री बनाउने भन्ने सोचेका छौ, अहिलेको बजेटले पनि केही समेटेको छ” मन्त्री बरालले भने । एक चरण खरिद भएका औषधी सकिएपछि अहिले फार्मेसी नाम मात्रको भएको हो ।
आदर्श दम्पत्तिका रुपमा अभिनन्दित भए एमाले नेताका चार जोडी ( फोटो फिचर)
काठमाडौं, १० वैशाख । काठमाडौंमा आदर्श दम्पत्तिका रुपमा ४ जोडी सम्मानीत भएका छन् । उनीहरुसंग
राजविराज, १० वैशाख । सप्तरीको छुट्टाछुट्टै ठाउँमा आज आगलागी हँुदा करीब रु २० लाखको क्षति
‘आदर्श पति पत्नी छान्ने प्रतियोगिता गरौं’ बामदेव गौतम (भिडियो सहित)
काठमाडौं, १० वैशाख । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले नेपालमा पनि आदर्श
राजिव पहारीले छोडे युवा संघ, नयां